Home Wararka Saciid Deni oo si diiran loogu soo dhaweeyay Degmada Xarfo
Saciid Deni oo si diiran loogu soo dhaweeyay Degmada Xarfo
Musharrax Madaxweyne Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey degmada xarfo oo ka mid ah degmooyinka Gobolka Nugaal.
Qaybaha kala duwan ee dadweynaha degmada Xarfo ayaa musharaxxa iyo wafdigiisa kaga hor yimi afaafka hore ee magaalada. Masuuliyiinta maamulka degmada xarfo ayaa dhankooda si miisaan weyn xambaarsan uga qayb qaatay abaabulka iyo isku duba ridka bulshada kala duwan ee degmada xarfo si ay uga qayb qaataan soo dhoweynta Musharrax Siciid Cabdullaahi Deni.
Previous articleQaramada midoobay oo ku eedeysay xukuumadda Kheyre Musuqmaasuq uguna baaqday…
Next articleUN envoy expressed concern the lack of oversight and calls on Somalia leaders to fight corruption
Ciidamada Amaanka Galkacyo oo howlgal ku soo qabtay dad faro badan
Gud. Yarisow “Magaalada Muqdisho waxaan ku soo rognay xaalad degdeg ah...